Falanqeeyaha Biyaha Cabitaanka, Tijaabiyaha Biyaha Tayada Sare - Sinsche
Colorimeter la qaadan karo
Q Taxanaha Colorimeter -ka la qaadan karo
T Taxanaha Tilmaamaha Multiimeter Colorimeter
Deegaanka- Tijaabada Biyaha Qashinka
Biyo -gelinta Magaalada
Sheybaarka & Waxbarashada
Barkadda iyo Spa
Cuntada iyo Cabbitaanka
Yaan nahay iyo Waxa aan qabano?
Macluumaad dheeraad ahTag
Sinsche waa soo -saare iyo alaab -qeybiye caalami ah oo teknolojiyad goyn ah, oo loogu talagalay falanqaynta iyo la socodka biyaha. Waxaa lagu aasaasay 2007 Shenzhen PR China, kooxdayada khabiirada hal -abuurka ah waxay u heellan yihiin horumarinta iyo taageeridda hababka iyo aaladaha cusub, si ay awood ugu siiyaan natiijooyin dhaqso leh, sax ah oo qiimo leh oo ka imanaya deegaannada ugu daran, ilaa shaybaarka casriga ah.
Qalabka ballaaran ee Sinsche ee qalabaynta iyo kiimikooyinka ayaa la diyaariyay in ka badan 14 sano si ay falanqaynta biyaha uga dhigto mid fudud, ka fiican - dhaqso badan, cagaar iyo xog badan leh.
T-CP40 Colorimeter-ka la qaadan karo ee Biyaha la Cabbo
TA-98 UV Spectrophotometer Muuqda
Falanqeeyaha Biyaha ee K600
Q-CL501 Colorimeter La qaadan karo ee Koloriin Bilaash ah, ...
TC-01 Titrator Digital Water
Z-T700 /Z-T500 Caqli badan oo Caqli badan Ana ...
Tayo Sare-Jaban Samee Meter Waayo Facaculture Fac ...
Baro wax badan oo ku saabsan xuduudaha tayada biyaha:
Koloriin Bilaash ah
Dhibaatada Caadiga ah ee Ogaanshaha Tayada Biyaha Barkadda Dabaasha
Xilliga xagaaga, meelaha dabbaasha ee waaweyn waxay noqdeen meel qaboojin badan. Tayada kormeerka tayada biyaha ee barkadda ma aha waxa kaliya ee ay ka welwelsan yihiin macaamiisha, laakiin sidoo kale waa shayga kormeerka muhiimka ah ee waaxda kormeerka caafimaadka. Ku saabsan ogaanshaha iyo maamulka ...
Baadhitaanka Koloriin ee hadhay: Uraya Laakiin Midab La'aan?
Jawigayaga imtixaanka dhabta ah, waxaa jira tilmaamayaal badan oo la cabbiro, Koloriin hadhay ayaa ka mid ah tilmaamayaasha inta badan u baahan in la go'aamiyo. Dhawaan, waxaan ka helnay jawaab celin isticmaaleyaasha: Marka la adeegsanayo habka DPD si loo cabbiro koloriin hadhay, waxay si cad u uraysay ur aad u culus, laakiin imtixaankii ...
Jawaabaha Dhibaatooyinka Biyaha ee Cabitaanka ee Caadiga ah
Biyuhu waa aasaaska nolosha, biyaha la cabbo ayaa xitaa ka muhiimsan cunista. Iyada oo si joogto ah kor loogu qaadayo wacyigelinta caafimaadka dadka, ayaa biyaha qasabaddu si aad iyo aad ah u siiyeen dhammaan qaybaha nolosha. Maanta, Sinsche wuxuu moodaa dhowr arrimood oo kulul, si aad u hesho faham qoto dheer ...
Soo -saaraha iyo alaab -qeybiyeyaasha caalamiga ah ee teknoolojiyadda goynta, oo loogu talagalay falanqaynta iyo la socodka biyaha.